Bheka Ukufuna Injabulo (2006) - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Buka ekusesheni kwenjabulo (2006)
Ukucinga injabulo (2006)
Ummeleli Wezentengiso, uChris Gardner ulwela ukuthola imali. Ujaha ukuphuma kulo, kepha umlingani wakhe uthamba kancane futhi unciphise ukuba yingozi kwabo. Ugcina eshiya uChris nomfana wabo oneminyaka emihlanu, uChristopher. Manje obhekene nendodana yakhe kuphela, uChris uhlupheka ukuthola umsebenzi, ngaphandle kwempumelelo. Lapho ekugcineni ethola ithuba lokuqeqeshwa enkampanini yabathengi abahlonishwayo, uzinikela ngokuphelele, ngisho noma okwamanje engakhokhelwa. Njengoba engakwazi ukukhokha irenti yakhe, uzithola esemgwaqweni noChristopher. Ubaba nendodana balale emakhaya noma eziteshini zezitimela, bebheka indawo yokukhosela usuku nosuku. Elahlekelwe yisimo esibi kunazo zonke empilweni yakhe, uChris uyaqhubeka nokubukela uChristopher, edweba uthando lwendodana yakhe nokuzethemba kwakhe ukunqoba izithiyo.
Usuke usabela "Ukufuna injabulo (2006)" Imizuzwana embalwa edlule